खेलकुद क्षेत्रको बिकासका लागी पुर्वाञ्चल स्तरीय टी– २० क्रिकेट प्रतियोगिता ऐश्वर्यप्रसाद आचार्य (बिपिन) अध्यक्ष,बेलबारी किक्रेट क्लब - Purbeli News
खेलकुद क्षेत्रको बिकासका लागी पुर्वाञ्चल स्तरीय टी– २० क्रिकेट प्रतियोगिता ऐश्वर्यप्रसाद आचार्य (बिपिन) अध्यक्ष,बेलबारी किक्रेट क्लब
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण १७, २०७३ समय: १६:५९:५९
पछिल्लो समय किक्रेट खेलप्रति युवाहरुको चासो बढेको छ । देशमा मात्र नभएर बिदेशमा समेत नेपाली खेलाडीहरुले राम्रो प्रर्दशन गरिरहेका छन । राजनीतिक अस्थिरता,खेलमैदान अभाव, प्रतियोगिताको आयोजना नहुनु लगायत बिभिन्न समस्याका बावजुद पनि किक्रेट खेल प्रतिको बिशेषगरी युवाहरुको आकर्षण बढेको छ । खेलाडीहरुलाई अबसर प्रदान नहुँदा कतिपय खेलाडीहरु पलायन समेत भएका छन ।
किक्रेटको क्रेज बढदै गएको अबस्थामा खेलाडीहरुलाई अबसर प्रदान गर्न खेलप्रेमीहरुको माग पुरा गर्न भन्दै मोरङको बेलबारीमा रहेको बेलबारी किक्रेट क्लबले यहि चैत २३ गतेदेखि पुर्वाञ्चल स्तरीय टी– २० क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । प्रतियोगिताको तयारी समेत यतिबेला शुरु भएको छ ।
यस भेगमे पहिलोपटक आयोजना भएको सो प्रतियोगिताका बारेमा आयोजक क्लबका अध्यक्ष ऐश्वर्यप्रसाद आचार्य (बिपिन ) सँग हामीले यसै बिषयमा कुराकानी गरेका छौँ । यहाँ प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीका अंशहरुः
बेलबारी क्रिकेट क्लब कहिले स्थापना भयो ?
मोरङको बेलबारी गाबिस हाल नगरपालिकामा पनि किक्रेट खेललाई स्थापित गर्नुपर्छ र यस भेगका खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर हामीले बेलबारी किक्रेट क्लब २०७१ सालमा स्थापना गरेका हौँ ।
के उद्धेश्यले स्थापना गर्नुभयो ?
यस क्षेत्रमा पनि किक्रेटको निक्के ठुलो क्रेज रहेको र कसरी कहाँ गएर खेल्नुपर्छ,के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएका तर खेलप्रति मोह भएका किक्रेट खेलाडीहरुको उत्पादन र खेलिरहेका खेलाडीहरुलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने र उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरी बेलबारीमा समेत खेलाडीहरु छन भन्ने कुराको प्रमाणित गराउन पनि हामीले यो क्लब स्थापना गरेका होँ ।
क्लबले अहिले सम्म के के काम गर्यो ?
क्लबले अहिलेसम्म सबैभन्दा पहिला त यस भेगका खेलाडीहरुलाई बिभिन्न प्रतियोगिताहरुमा सहभागी गरायौँ । प्रतियोगितामा जानका लागी उनीहरुलाई सहयोग गर्यौ । जसको फलस्वरुप यहाँबाट सहभागी भएका खेलाडीहरुले २०७१ सालमा डाँगी किक्रेट एसोसिएसन केराबारीद्धारा आयोजित टि –२० क्रिकेट प्रतियोगितामा दोस्रो,बेलबारी खेलकुद महोत्सबले आयोजना गरेका प्रतियोगितामा प्रथम,कोसीहरैचाको शुक्रबारे क्रिकेट क्लबले आयोजना गरेका टि– २० प्रतियोगितामा प्रथम लगायत दर्जनौ प्रतियोगितामा सहभागी भई पुरस्कार समेत जित्न सफल भएका छौँ ।
जुन उद्धेश्यकासाथ क्लब स्थापना भयो त्यो अनुरुप चल्न सकेको छ ?
हाम्रो जुन उद्धेश्य अनुरुप क्लब स्थापना भएको थियो । त्यो लगभग पुरा भएको छ । त्यसमा पनि यहि भेगमा एउटा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने रहर थियो । आर्थिक अबस्था कमजोर भएका कारण हामीले त्यो पुरा गर्न सकेका थिएनौँ । तर अब त्यो पनि पुरा हुने तरखरमा छ । शुरुमा हामीले क्लब स्थापना गर्दा यस भेगका केही ब्यत्तिहरु हामीलाई असफल पार्न लागेका थिए ।
उनीहरु हाम्रो खिसी गर्थे । यिनीहरुले के गर्न सक्लान र हामी बिना भनेर हाम्रो खिल्ली उडाउँथे । तर हामीले त्यो गलत साबित गरेका छौँ र आज यो क्लब स्थापित अबस्थामा आईपुगेको छ । जसको परिणामस्वरुप हामी पुर्बाञ्चस्तरीय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्षम भएका छौँ ।
प्रतियोगिता किन आयोजना गर्नुभयो ?
खेलाडीहरुलाई अबसर प्रदान गर्न र राष्ट्रिय स्तरमा पनि बेलबारी र यस भेगका खेलाडीहरुलाई परिचित गराउनकै लागी भएपनि हामीले यस भेगमा पहिलोपटक यस किसिमको प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेका हौँ ।
प्रतियोगितामा कतिवटा टिम सहभागी हुँदैछन ?
प्रतियोगितामा पुर्वाञ्चलका बिभिन्न जिल्लाका १६ वटा टिमहरु सहभागी हुँदैछन ।
प्रतियोगितामा बिजेताले कति पुरुस्कार पाउँछन ?
प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद ५१ ह्जार सहित ट्रफी ,मेडल, प्रमाणपत्र दोस्रो हुनेलाई नगद ३१ हजार सहित ट्रफी ,मेडल, प्रमाणपत्र, प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई ५१ नगद सय उतकृष्ट बलरलाई नगद ३१ सय उत्कृष्ट ब्याटसम्यानलाई नगद ३१ सय र प्रत्येक दिन म्यान अफ दि म्याच ११ सय प्रदान गर्ने छौँ ।
प्रतियोगितामा कति खर्च लाग्ने अनुमान छ ?
प्रतियोगितामा हामीले अनुमानित ३ लाख खर्च हुने आँकलन गरेका छोँ । खर्च बढन् पनि सक्छ । यो हाम्रो आँकलन मात्र हो ।
खर्चको श्रोत चाँहि के हो ?
प्रतियोगिता आयोजनाका लागी हामीले नगर खेलकुद बिकास समिति, जिल्ला खेलकुद बिकास समिति र बिभिन्न प्रायोजकहरु मर्फत खर्च जुटाउने सोच राखेका छौँ ।
प्रतियोगितामा आम्दानी भयो भने चाँहि के गर्नुहुन्छ ?
हामीले प्रतियोगिता आयोजना गरेका खेल क्षेत्रको बिकास र खेलाडीहरुको क्षमता बृद्धिका लागी नै हो । तसर्थ त्याँहाबाट आम्दानी भयो भने हामी खेलाडीहरुकै लागी सो रकम खर्च गर्नेछौँ ।
अन्त्यमा हामीले बेलबारीमा पहिलोपटक पुर्बाञ्चलस्तरीय किक्रेट प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछौँ । सबै बेलबारीबासीहरु,यहाँका संघसंसस्थाहरु,खेलप्रेमीहरु,खेलाडीहरु साथै समस्त महानुभावहरुलाई यो बेलबारीको गौरव पनि भएका कारण यो प्रतियोगितालाई सफल पार्न सबैले आफना ठाँउबाट सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । प्रस्तुति : नरेन्द्र बस्नेत